Somaliland oo ka Hadashay Weerarka Maamulka Soomaaliya ee Puntland
Hargeysa (Dawan)- Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay weerar gaadmo ah oo ay maleeshiyaadka Puntland ku soo qaadeen jiidda hore ee ciidammada qaranka ee ku sugan Tukaraq, waxaanay ku eedaysay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya in aanay fulin go’aamadii beesha caalamku soo jeedisay.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Maxamed Muuse Abees oo shalay shir jaar’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa faahfaahiyey dagaalkaas, waxaanu yidhi “Waxaan warbaahinta isugu yeedha,y in aanu ka hadlo war la xidhiidha dhacdo yar oo xalay (habeen hore), abaarro 9:00 cawaysnimo ka dhacday fadhiisinka hore ee ciidammada qaranka Somaliland degan yihiin ee Tukaraq, halkaas oo ay maleeshiyadda Puntland ay ku soo qaadeen weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah.”
Wasiir Maxamed Muuse Abees waxa kale oo uu sheegay in ciidamada Somaliland, ay ka jawaabeen weerarkaasi, isaga oo arrintaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi “Dagaalkaasi markii uu dhacay markiiba maleeshiyada Puntland jawaabteedii way heleen, goobtii ay soo weerareenna waa laga celiyey. Waxa dagaalkaasi Somaliland nagaga dhaawac dhintay hal askari. Wax kale oo khasaare ah oo naga soo gaadhayna ma jirto. Laakiin iyaga Puntland dhinacooda ma xaqiijin karno dhimasho iyo dhaawacba, laakiin wax way jiraan.”
Wasiir ku xigeenka warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Abees waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay ka baxday, isla markaana aanay fulin heshiiskii beesha caalamku ay ku dhex-dhexaadisay Somaliland iyo Soomaaliya, waxaannu yidhi; “Waxa soo noqnoqday weerarka ay maleeshiyaadka Puntland ay ku soo qaadayaan Somaliland, waxase aanu uga digaynaa oo u sheegaynaa inaanu annagu (Somaliland) u hoggaansanay go’aankii EU-da iyo IGAD oo iskaga dabqaadayey Xamar, Garoowe iyo Hargeysa, go’aamadii ka soo baxayna ay ahaayeen afar qoddob oo kala ahaa in xabadda la joojiyo, in isdhaafsiga maxaabiista iyo barkacayaasha, annagu sidoodii ayaanu qoddobadaas u qaadanay oo u fulinay annagoo eegayna duruufaha iyo dhibaatooyinka taagan, laakiin dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintan may qaadan oo waxba kamay fulinin.
Markaa annagu (Somaliland) waxaannu leenahay intii aanu dulqaadanaynay waanu dulqaadanay maanta wixii ka dambeeyana waajibakayaga ayaanu ka qaadan doonaa.”